Ogbe retorts nwere ike jiri ụzọ dị iche iche nke usoro nnyefe. Fọdụ n'ime ha na-ejikwa nrụgide ma ọ bụ nrụgide nrụgide iji nyere aka chebe iguzosi ike n'ezi ihe nke akpa ahụ n'oge usoro (ya bụ: iji gbochie ngwugwu ahụ ka ọ ghara ịgbawa ka ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide na-ewuli n'ime akpa ahụ n'oge usoro ahụ). Igwe na-agbanwe agbanwe, dị ka ite igwe, nwere ike iguzogide nnukwu ọdịiche dị n'etiti nrụgide dị n'ime na n'èzí nke akpa ahụ, ya mere ụdị ụdị ndị a anaghị achọkarị nrụgide. Enwere ike ịhazi ha na gburugburu ebe obibi uzuoku nke 100% na-enweghị iji nrụgide n'oge usoro kpo oku. N'aka nke ọzọ, ihe ndị ọzọ na-emebi emebi na nke nwere ike ịnagide enweghị ike ịnagide ọdịiche dị iche iche dị elu, yabụ e webatara ikuku na ntanetị iji nyefee nrụgide iji jigide iguzosi ike n'ihe ngwugwu n'oge usoro ahụ. Typesdị ihe ndị a chọrọ usoro nrụnye usoro ọfụma karịa ịgba mmiri, mmiri mmiri ma ọ bụ ịsa mmiri, imikpu mmiri ma ọ bụ sistemụ ikuku. Ebe ọ bụ na ikuku bụ insulator, a chọrọ ịkpali ma ọ bụ na-agwakọta usoro mgbasa ozi na retort iji zere ntụ oyi na igwe, si otú ahụ na-ekesa oke nkesa ọnọdụ okpomọkụ n'oge niile na ibu ngwaahịa. Ngwakọta a na-arụzu site na usoro mmiri dị iche iche a kpọtụrụ aha n'elu, ma ọ bụ site na onye ofufe n'ihe banyere ikuku ụgbọ mmiri, na / ma ọ bụ site na ntụgharị ntụgharị nke ntinye / drum n'ihe banyere ụdị igwe ịkwa ụja.
Nrụgide dị oke mkpa dịkwa mkpa na usoro njupụta nke usoro nlọghachi n'ihi na ka a na-ewebata mmiri dị jụụ na nlọghachi, ọ na-ada uzuoku e kere na usoro kpo oku. Enweghi iwebata oke nrụgide nke ikuku n'oge jụrụ oyi, nrụgide na nlọghachi nwere ike ịdaba na mberede n'ihi uzuoku uzuoku wee mepụta ọnọdụ agụụ na nlọghachi. Ọ bụrụ na nke a mee, ọdịiche dị n'etiti gburugburu mpụga na ọnọdụ okpomọkụ / ọnọdụ nrụgide n'ime akpa ahụ na-adị oke oke wee si otú ahụ mee ka akpa ahụ gbawaa (nke a na-akpọ "buckling"). Kpọmkwem akara overpressure n'oge mbụ n'ụzọ nke jụrụ dị mkpa iji zere n'elu ọnọdụ ma ramping na mgbali ala na nke ikpeazụ nkebi nke jụrụ dị mkpa dị ka nke ọma izere ndinuak akpa (ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ a maara dị ka "paneling") dị ka okpomọkụ na nrụgide n'ime akpa ahụ na-agbada. Ọ bụ ezie na usoro nlọghachi ahụ na-egbochi ma ọ bụ na-ebibi nje ndị na-akpata nje, ọ naghị ebibi ihe niile mebiri emebi nke microscopic. Thermophiles bụ nje nwere ike iguzogide okpomọkụ karịa oke okpomọkụ na-agbanwe agbanwe. N'ihi nke a, a ga-eme ka ngwaahịa ahụ dị jụụ n'okpuru okpomọkụ dị n'okpuru nke ihe ndị a ga-amụba, si otú a na-akpata thermophilic spoilage.